သတိုး: အဆုံးမဲ့ နိဂုံး (ဇာတ်သိမ်း)
Posted by သတိုး at 7:43 PM
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် November 14, 2011 at 7:45 PM
စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီးသဝန်တိုနေတာကိုးးး။ လွှတ်ထားပြီး မျက်နှာလွှဲနေလိုက်ရင် အေးသွားမှာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းလည်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပါ။ ဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းတယ်။
jr November 14, 2011 at 8:22 PM
အဲထဲက ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီး ဒုတိယပိုင်းဖတ်ချင်နေတာ။
သူ့ဘာသာ ပူလောင်မှန်းသိရက်နဲ့ မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ကောင်းတဲ့စိတ်က တစ်ဝက်၊ နောက် ပူလောင်တဲ့ စိတ်ကတစ်ဝက်နဲ့။ အရမ်းသနားဖို့ ကောင်းတာပဲ။
ဇာတ်ကောင်ကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်ပြီး ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ အဆုံးမဲ့ နိဂုံးပါပဲ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 14, 2011 at 11:19 PM
မိန်းမတွေရဲ့ သဝန်တို သံသယကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဝတ္ထုလေးဘဲ..
အစကနေ အဆုံး ပေါင်းဖတ်သွားတယ်
ဒုတိယပိုင်းကို ဖတ်နေရင်း တစ်ခုခု မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်.
ဝတ္ထုမှန်းသိနေပေမဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ရဲ့ သက်ဝင်မှုက ဖမ်းစားလွန်းတော့ တကယ်ဖြစ်နေသလို ထင်လာမိတယ်။
ဆုတောင်းမပြည့်ဘူး မမရည် တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်..
မသေချာတာက ခင်မင်းက တကယ်သတ်တာလား..
အိပ်မက်ထဲမှာ မသိစိတ်ရဲ့ စေခိုင်းမှုနဲ့ သတ်မိတာလား..
သေစေချင်စိတ် ပြင်းပြလွန်းတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ သတ်သလိုနဲ့ အပြင်မှာ သတ်လိုက်မိတာလား...
သဝန်တိုမှုဆိုတာ တကယ်ကို ပူလောင်ရပါတယ်..
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) November 15, 2011 at 2:26 AM
မမရည်က နားလည်စွာ သူ့ဖာသာသူ အဆုံးစီရင်သွားပုံ ရပါတယ်။ မိန်းခလေးတစ်ယောက်မှာ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ ယောက်ျားတွေမှာတောင် ရှိနေတတ်တာ။
ခင်မင်းပါ အသက်ပါသွားလေသလား မသိ။း(
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 15, 2011 at 2:35 PM
အရမ်းကောင်းတယ်အကို...စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ အသက်ရူဖို့တောင် မေ့လောက်အောင်ပဲ ..သံသယက ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်... သဝန်တိုတက်တာလဲ ပြဿနာအကြီးကြီး ဖြစ်စေတာပဲ...
မြသွေးနီ November 15, 2011 at 3:34 PM
စာရေးဆရာဆိုးတယ်ဗျာ..။အဆုံးသတ်နဲ့ စာဖတ်သူကို ငိုင်ကျသွားအောင်၊ အတွေးတွေ ပွားသွားအောင် လုပ်ထားရက်တယ်။ မမရည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး။ ခင်မင်းရဲ့ စိတ္တဇအိပ်မက်က ၀န်တိုမှုတွေလွှမ်းပြီး မသိစိတ်နဲ့ သတ်မိသွားတာ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား...။ :)
ဟန်ကြည် November 15, 2011 at 7:41 PM
အလုပ်များနေတာကြောင့် ကိုသတိုး ပို့စ်တွေတက်နေတာ သတိမထားလိုက်မိဖူးဖြစ်နေတယ်...အဆင်တော့ပြေသားပဲ စောင့်စရာမလိုတော့ဘဲ နှစ်ပုဒ်လုံး အစအဆုံးဖတ်လိုက်ရတယ်...
အရေးအသား၊ အယူအဆ၊ အသယ်အပို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတဲ့ ၀ထ္ထုကောင်းတစ်ပုဒ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျား...
အလင်းသစ် November 15, 2011 at 10:29 PM
အိပ်မက်ယောင်ပြီး သတ်လိုက်မိလေသလား??? သူ့ဘာသာတော့ သတ်သေမယ်မထင်ဘူးလေ.. ဆိုတော့ကာ ဝတ္ထုလေးက အရမ်းကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ။။။
ကိုဇော် November 17, 2011 at 11:58 PM
၁ ကိုပါ ပြန်ပြီးတော့ ဖတ်နွှေးပြီး ဖတ်သွားတယ်ဗျာ။
ပြောပြရမှာကို ခက်တယ် လို့ ဆိုရမယ်။